Somaliland: Afhayeenkii Xarunta Xuquuqul Insaanka”HRC” oo La Xiray – Goobjoog News
Somaliland: Afhayeenkii Xarunta Xuquuqul Insaanka”HRC” oo La Xiray
Guddoomiyaha xarunta xuquuqul Insaanka “HRC”, Guuleed Axmed Jaamac oo aan la yeelannay wareysi gaar ah ayaa noo xaqiijiyay in dacwad ka dhan ah laga furay maxkamadda gobolka Hargeysa, Afhayeenkii xarunta ee Axmed Xuseen Cabdi xabsiga loo taxaabay.
Sababta xarigga afhayeen Axmed ayuu ku sheegay iney ka dambeyso war-saxaafadeed uu ku saxiixnaa oo uu kaga hadlay dacwadda ka dhanka ah xafiiska ee maxkamadda Hargeysa laga furay.
Dhanka kale, waxa uu guddoomiye Axmed “Guuleed Dafac” uu sheegay sababta ka dambysa dacwadd ka dhan ah oo maxkamadda Hargeysa looga soo oogay:
“Waxa la iiga yeedhay maxkamadda gobolka Hargeysa oo dacwad la iiga soo furay, waxaana la igu haystay warqado cabasho ah oo aanu dadweynaha u qeybinnay oo aanu ku dooneynay in booliska isbedel lagu sameeyo, si loo helo xafiis la geeyo cabashada bulshada ee dhanka booliska”.
Xaruntan xuquul insaanka ayaa shacabka u qeybisay warqado cabasho ah oo looga soo horjeedo xadgudubyada booliska, kadib markii cabashooyin farabadan ay kasoo gaareen xaruntooda xuquul insaanka, waxaa illaa hadda warqadahaa saxiixay dad gaaraya illaa 1000 qof oo doonaya in booliska hab dhaqankiisa isbedel lagu sameeyo anshixiisana la hagaajiyo, iyadoo ugu dambeyn qoraallada cabashada ah loo gudbinayo Madaxweyne Siilaanyo.
Sanadkii 2015 ayaa la xirey guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Guuleed Dafac oo xilligaa lagu xiray hadal uu saxaafadda siiyay oo uu ku dhaliilay cadaaladda Somaliland.
Associated Press: Ku-xigeenkii ISIS Ee Soomaaliya Oo La Dilay
Jaaliyadda Soomaaliyeed Ee Maraykanka Oo Su’aallo Weydiiyey Wasiir Cawad
Ivpscf eggwkg Cialis discount levitra vs cialis
Czyhgm hpujhn 50mg viagra cialis for sale
Smlpxk vbldki ed drugs cialis coupons
Truazn erjmxi Buy pfizer viagra rx pharmacy
otc viagra viagra without prescription viagra price comparison
order viagra online viagra viagra without a doctor prescription canada
online viagra prescription viagra canada viagra discount
viagra professional buy viagra from canada is there a generic viagra
impotance ED Pills Without Doctor Prescription prescription without a doctor’s prescription
side effects for cialis cheap cialis daily use cialis cost
generic names for cialis and viagra buy tadalafil cialis dosages
erectile dysfunction treatments https://canadaedwp.com/ drug prices comparison
Libya: Askar Ka Tirsan Ciidamad Khaliif Xaftar Oo La Dilay
cialis generic versus brand name cialis 20mg aus usa cialis...
cialis on paypal gum cialis no prescription female cialis [u...
buy viagra 100 generic viagra sildenfil citrate australia п»...
cialis liquid for sale cialis and no prescription cialis wit...
viagra cialis levitra sample pack coupons for cialis cialis...